Muxajabaddii koowaad ee Cayaarta Kiriketka ku metesha Britain. | HimiloNetwork
Muxajabaddii koowaad ee Cayaarta Kiriketka ku metesha Britain.
Posted by: Himilo in Dunida Muslimka August 15, 2021	0 81 Views
MUQDISHO (HN) — Abtaha Maqsood oo 22 jir Glasgow ku nool waxay iyada oo aad u yar ardaaga gurigooda kula dheeli jirtay cayaarta kiriket-ka walaalkeed iyo aabaheed. Waxayna maalin kamid ah maalmahaas go’aansatay inay noqoto gabadhii ugu horreysay oo – iyada oo muxajabad ah – dalkeeda Britain ku metesha tartanka caalamiga ah ee kiriket-ka.
Waxay kasoo jeeda dalka Pakistan. Qoyskeeda oo dhami waxay xiiseeyaan cayaartan – waana sababta ay iyaduna u dooratay inay meel muuqata ka gaarto – iyada oo isla mar ahaantaana aan lumineyn heybteeda Muslimnimo caqiidadeeda Islaamiga ah.
Waxay kamid noqotay koox gudaha ka dheesha iyada jirta 11. Markii ay 12 jirsatayna, waxay hormuud u noqotay da’yarta 17 jirka ka yar ee Scotland uga qeybgalaya tartanka.
Waxay goor walba oo fagaaraha lagu arko kusoo muuqata xijaabkeeda mana doorbido inay u tanaasusho diinteeda taas beddelkeeda waxay dooneysaa inay noqoto Muslimaddii ugu horreysay ee billad usoo hoysa dalka ay ku nooshahay ee Britain.
Previous: 79 jir Muslim ah oo kubadda cagta dheela.
Next: “Waxaan isku arkaa qofka ugu Qurxoon dunida.” — Mary.
44-guurada Maalinta Warbaahinta Soomaaliyeed oo la xusay
Madaxweyne u muuqo sida laguu maleynayo!